Mampatavy ny hevintsika
Te hihena ?
Zavatra mampatavy nefa tsy rarahiantsika ...
Iza no mahatsiaro an'i Quasimodo ?
Fampahatsiahivana ny tantaran'ny : Le bossu de Notre Dames
Nohenjehina sy nogadrain'ny mpitsara Claude Frollo, izay "nahita ny ratsy na aiza na aiza afa-tsy tao am-pony", ny bohémiens. Nisy bohémiens telo nandositra : Vehivavy sy ny vady aman-janany. Nefa tratran'ny miaramilan'i Frollo. Nandositra ny renin'i Quasimodo mba hamonjena ny zanany. Noho ny nahita izany i Frollo dia nanenjika azy tamin'ny soavaly. Noheverin'i Frollo fa mandositra miaraka amin'ny vola izy io. Maty ny niafaran'ny renin'i Quasimodo. Dia hitan'i Frollo fa hay zaza ratsy tarehy no nafeniny. Saika ho ariany any anaty lava-drano ilay "biby mampitahotra" nefa tratran'ilay pretra tao amin'ny paroasy Notre Dames tao Parisy izy. Nosakanan'io pretra io izy. Lasa niantoka ilay zaza i Frollo. Ary notereny ho gadraina tany ambonin'ny Notre Dames ilay zaza mba hampaneno ny lakolosy. Tsy nisy olona nahazo nahita azy io satria mahamenatra an'i Frollo.
Ahoana ny firesak'i Frollo amin'i Quasimodo ?
Izay no fanontaniana tsara fipetraka !
Notenenin'i Frollo i Quasimodo hoe :
biby mampitahotra izy io ;
tsy normal izy io ;
tsy hisy mpitia mihitsy izy io, na ny reniny aza nanary azy (laingan'i Frollo) ;
Tsy mahazo mivoaka mihitsy izy io raha tsy izay ho enjehina toa ny biby mampitahotra.
Nefa indray andro, nanapa-kevitra ny hivoaka i Quasimodo mba hanotrenana ny fetin'ny adala. Ary lasa voafidy ho mpanjakan'ny adala izy noho ny haratsin'ny tarehany. Nefa, notorahan'ny mpiambina an'i Frollo voatabia izy ka narahin'ny olona izany fihetsika izany. Nampijaliana i Quasimodo, dia niangavy ny "tompony" (Frollo) izy mba hanampy azy. Nefa tezitra i Frollo ka tsy niraharaha.
Novonjen'i Esmeralda i Quasimodo ary nanazava tamin'ny olon-drehetra atao toa an'i Quasimodo ny bohémiens toa azy : enjehina ...
Quasimodo ve ianao ?
Mihevitra ve ianao fa biby mampitahotra ianao satria matavy ?
Mihevitra ve ianao fa tsy mitovy amin'ny olon-drehetra satria be kibo ?
Mihevitra ve ianao fa tsy normal satria be fe ?
Mihevitra ve ianao fa tsy hisy mpitia mihitsy noho ny bikanao ?
Mihevitra ve ianao fa ho ahiliky ny ray aman-dreninao satria matavy loatra ? na mahia loatra ?
Raha mihevitra izany ianao :
na miezaka ny ho normal ianao ka manao régimes izay mampatavy anao.
na miezaka ny manasazy tena ianao satria heverinao fa mendrika ny tsy ho faly mihitsy ianao : mihinana be ianao mba ho "biby mampitahotra" foana.
na miezaka ny mamono tena ianao satria mihevitra ianao fa tsy mendrika ny ho velona
Araho izahay amin'ny FAQ Mifandraisa Lakilean'ny
Facebook Instagram aminay fahombiazanao
Inona no fanirianao ?
Efa nanao régime ve ianao ?
Tsy naharitra hatramin’ny farany ve ianao ?
Niampatra nisesika ilay karazan-tsakafo izay nofadianao efa ela ve ianao tamin'izany, toa ny vary, paty, ovy, mofo, mofomamy, glasy, sokola … ?
Tsaroanao fa nanamelo-tena sy kivy tamin’ny tenenanao ve ianao tamin’izany fotoana izany ?
Tamin’ny tapitra ny régime nataonao, diso fanantenana ve ianao satria tsy nety nihena akory ny tavy manodidina ny kibonao, na ny fe, fa tany an-kafa indray no nihena toa ny tany an-tanana na fitombenana indray ohatra no nihafisaka ?
Leo ny manao abdos aman-taonina ve ianao nefa mihamafy fotsiny ny kibonao fa tsy mba mihena akory ?
Efa nanandrana hotra na menaka mampahia tamin’ny kibonao na ny feanao ve ianao nefa tsy very 10 santimetatra akory ?
Efa nanandrana nisotro dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nety nihena akory ny kibonao ?
Efa nampifandimby régime maro ve ianao satria tsy naharitra ela tamin’ireo izay efa nandramanao ?
Leo ny mifady ireo sakafo tianao, toa ny vary, paty, mofomamy, hena, sokola, glasy, pizza … ve ianao ?
Efa niaritra mafy ny aretin-kibo sy ny fivalanana noho ny fisotroana dite mampahia na tambavy mampahia ve ianao nefa tsy nihena intsony afaka herinandro vitsivitsy taty aoriana ?
Tsikaritrao ve fa misy tavy manodidina ny valahanao (amin’ny sisin’ny kibo) izay mananosarotra ny fanidiana ny patalohanao ?
Manana akanjo maro izay tsy sahinao hanaovana noho ny tahotra/henatry ny fijerin’ny olona ny vatanao ao anatin’ilay izy ve ianao ? Na koa hoe tsy antonina anao intsony izy ireny ?
Leo ny jerijeren’ny olona , fosafosan’ny manodidina, na tondro-molotrin’ny olona ve ianao noho ny bikanao ?
Leo ny mahita tovovavy mampidera ny vatany tsara bika any anaty magazines, horonan-tsary, clipy na eny an-dalana ve ianao ?
Rehefa mandeha mividy akanjo ianao, sahirana ve ianao vao mahita akanjo izay tianao nefa antonina anao ?
Te hihena ve ianao ?
Tianao ve ny hanena ny kibonao ?
Nofinofinao ve ny hanena ny tavy amin’ny sisin’ny kibonao (poignées d’amour) mba hanamora ny fanidiana ny patalohanao ?
Te hividy akanjo tsara tarehy sady antonina anao amin’izay ve ianao ?
Tianao ve ny hividy bikini ary manao an’izany tsy misy complexe ?
Te mba haharitra tsy ho solafaka amin’ny fakam-panahy ka tsy hiampatra hisesika hihinan-kanim-be intsony ve ianao ?
Nofinofinao ve ny mba hanintona olona bebe kokoa ?
Tena irianao ve ny hatoky tena bebe kokoa ?
Izany hoe, tianao ve ny hihena ary tsy hiverina hitombo ho toa ny taloha intsony ?
Te hanena ny haben’ny kibonao ihany koa ve ianao ?
Ary tianao ve ny hahazo izany rehetra izany nefa tsy mila mampijaly tena manao régime ?
Efa hanananao eny am-pelatananao ny lakile an’ny fahombiazanao. Efa ianao no « tompon’ny lakile » an’ny fahombiazanao ...
Indrisy anefa fa tsy mbola fantatrao fotsiny ny varavarana izay hovoaina amin’izany.
Fa alohan'ny hamakianao an'izay ato amin'ito tranon-kala ito dia hadinoy daholo izay fiheverinao rehetra momba ny fihenana.
Te hihena aho !